Grumman Mallard 2 afọ 4 ọnwa gara aga #957
Achọghị m ka m nweta ụgbọelu a ọfụma nke ọma ... naanị ihe m ga - enweta bụ anwụrụ anwụrụ ebe o kwesiri ịdị. Emegoro m ya na folda ziri ezi, mgbe m mepekwara folda ahụ, SEEMS nwụnye dị mma, otu ọ kwesịrị. Ma mgbe ị na-ahọta ụgbọ elu, enweghị ntụle nlele ọ bụla na agbanyeghị na ụgbọ elu ahụ na-egosi na ụgbọelu ahọpụtara, ọ gbagoteghi (naanị anwụrụ ọkụ). Ana m eji P3D V4.2.
Otu nsogbu Grumman Albatross. Eleghi anya adighi nma maka 4.2?
Ndumodu ikpe azu: site jdlinn.
Grumman Mallard 2 afọ 4 ọnwa gara aga #959
Ugbu a, Mallard na Albatross enweghị P3D v4 n'ihi na emebere ụdị ha maka FS2004, yabụ, ọ bụghị dakọtara 64 bikọtara. P3D v4 bụ 64 ibe n'ibe na enweghị ụkpụrụ maka 32bits ụdị. M ga-emezi ozi a na ibe weebụ nke ndị ahụ add-ons.
Agbanyeghị, Milton Shupe na-eme ntụgharị nke ala maka Mallard ahụ, ọ ga-adabakwa nso na ya P3Dv4. Anyị ga-emelite faịlụ a n'oge na-adịghị anya ewepụtara ya n'ihu ọha.
Grumman Mallard 2 afọ 4 ọnwa gara aga #960
Super na-aza ajụjụ. Daalụ.
Grumman Mallard 2 afọ 4 ọnwa gara aga #997
Ugbu a Mallard dakọtara P3D v4, ewepụtarala ụdị ọhụụ
Grumman Mallard 2 afọ 4 ọnwa gara aga #998
Daalụ Erik! Na nbudata ya ugbu a.